Comité de normalisation: nohalavaina ny fotoana hiasany | NewsMada
Comité de normalisation: nohalavaina ny fotoana hiasany
Araka ny tapaky ny federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra maneran-tany (Fifa), nivory ny zoma lasa teo, ny nanapahana fa nohalavaina hatramin’ny 1 septambra 2019 ny fe-potoam-piasan’ny komitin’ny fanamarinana na Comité de normalisation de la federation malgache de football.
Ankoatra izay, hisy iraka manokana avy any amin’ny Fifa ho avy eto Madagasikara, ny 17 mey ho avy izao, hidinika sy hiresaka ny daty sy ny fomba hanatanterahana ny fifidianana ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), ato anatin’ny efa-bolana, fotoana mbola maha eo ireo mpikambana ao amin’ity komitin’ny fanamarinana ny baolina kitra malagasy ity.
Tsiahivina fa tsy ny an’ny federasiona ihany no fifidianana atao fa eo ihany koa ny an’ny seksiona sy ny ligy any Tsiroanomandidy, tsy mbola tontosa ihany koa. Ankoatra izay, hikarakara ny fiatrehan’ny Barea de Madagascar ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika « Can 2019 » ihany koa ny Comité de normalisation. Notsiahivin’ny filohany, i Atallah Béatrice, fa tsy miditra amin’ny fifantenana ireo mpilalao handrafitra ny Barea ny tenany sy ny Comité de normalisation fa anjaran’ny mpanazatra izany.